Ngwá Ọrụ Kwesịrị Ekwesị maka Mmetụta Ọrịa ma ọ bụ Mgbasa Ozi Akụkọ | Martech Zone
Meltwater bụ ezigbo onye nkwado maka blọọgụ anyị. Anyị na ha mere webinar mba ụwa na ha na ntanetị mmekọrịta ọha na eze bụ nke juru n'ọnụ ma nwee nnukwu nzaghachi. Anyị eruola njikere ịhapụ ha akwụkwọ ozi mbụ anyị na ha! Nkwado a lekwasịrị anya na ngwaahịa ha na News na Buzz maka ọdịnala na mmekọrịta mmadụ na ibe, n'otu n'otu, mana achọrọ m iweta otu akụkụ nke ngwaahịa ngwaahịa ha maka ndị ọkachamara mmekọrịta ọha na eze nke na-eme ndụ m dị ka influencer a ton mfe…
Imirikiti olulu m na-anata n'aka ndị ọkachamara n'ihe gbasara mmekọrịta ọha na eze na-abịa site na adreesị nke ha ma bụrụkwa ihe na-eme mkpọtụ na-egbochi igbe ozi m. Ndị a na-eji ngwa ọdịnala ọdịnala PR nke na-edepụta adreesị email m na ha SPAM ihe nzuzu. Ha na-aghọtaghị otú mee blogger obi siri m ike na ndi oru nta akuko dika usoro ha si adi obere.
Ana m aza ọkwa dara ogbenye ma ọ bụ nke na-adịghị mkpa ka mmadụ were 5 nkeji lee ka ọ bụrụ ọdịnaya m metụtara ndị ahịa ha. Echeghị m na ọtụtụ n’ime ha na-eme nke ahụ ebe ha na-eme ọsọ ọsọ ma ha echeghị na enwere mmetụta maka omume ha. Ma enwere. Ndị dị ka m na-akọ ozugbo dị ka ihe efu ka anyị wee ghara ịhụ ọkwa ọzọ na igbe mbata anyị. Nke ahụ bụ ihe nwute n'ezie maka onye PR ahụ - onye nwere ike ịnwe oke egwu maka blọgụ anyị otu ụbọchị.
Ternyaahụ, enwetara m ozi email sitere n'aka ụlọ ọrụ PR na-eji Meltwater's PR wepụta ngwaọrụ. Agaghị m ekwupụta onye zitere ha ebe ọ bụ na ha adịghị mkpa - mana email ahụ bụ HTML nwere eserese ma nwee nhọrọ kacha mma n'ụwa na ya wepu njikọ. Na ịpị njikọ ahụ, akpọtara m na ihuenyo ọzọ:
Chaị, otu nhọrọ wepu aha na ọkwa ndị a ma ọ bụ ọbụlagodi nchekwa data niile! Nke ahụ dị ike, nke doro anya ma na-ejide ụlọ ọrụ PR na Meltwater na-aza ajụjụ maka onye ọ bụla na-eji usoro ha eme ihe. Ọbụna ihe na-adọrọ mmasị bụ nhọrọ nke email na-abịa site na Meltwater ma ọ bụ na-agagharị na ọrụ email gị. Nke ahụ bụ ọkwa ọzọ nke ịza ajụjụ ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ahịa email na-enye ike ịbugharị adreesị email na-akpaghị aka ma ọ bụ ọbụna gbochie ha.
Ọ bụrụ na ị na - eduga ndị ọrụ mmekọrịta ọha na eze ma ọ bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ma chọọ n'ezie ka ndị otu gị nwee mmekọrịta (dịka ha kwesịrị ịdị) wee jide ha ajụjụ, nke a bụ ụdị ngwa ọrụ ịchọrọ maka ịgafe. Ghara ikwu Meltwater nwere ihe karịrị kọntaktị mgbasa ozi 350,000 na nchekwa data ha nwere ọtụtụ ozi na nke ọ bụla iji nyere gị aka ịchọta ndị ziri ezi na ndị nta akụkọ.
Ngosipụta: Meltwater arịọghị ọkwa a, ọ bụ m.
Tags: pitchozi emailndị na-eme ihe ikepitching ndi oru nta akukoprmmekọrịta ọhaneze
Uto Hacking maka Ahịa Marketing